Cambrian fauna: njirimara na otu anumanu | Network Meteorology
El Oge Cambrian bụ nke mbụ ide oge Paleozoic. Ọ malitere ihe dịka 541 nde afọ gara aga wee ruo ihe dịka nde 485 afọ gara aga. Ọ bụ n'oge a ka ụwa anyị hụrụ nnukwu mgbanwe na nchịkọta nke ndụ dị adị. Na Anụmanụ Cambrian Ọ bụ onye mbido nke ihe akpọrọ "Cambrian Explosion". Ọ bụ ebe a ka ọtụtụ anụmanụ na-apụta na-adịworị multicellular nke malitere ịmịkọ n'oké osimiri.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile na mmalite nke ụmụ anụmanụ Cambrian.
1 Oge Cambrian
3 Anụmanụ Cambrian
3.3 Osisi Cambrian: mollusks
3.5 Anụmanụ Cambrian: chordates
Nke mbụ, anyị ga-enyocha ụfọdụ njirimara ndị bụ isi nke oge a. Ọ bụ otu n'ime usoro ọmụmụ ala nke ndị ọkachamara na-amụ banyere ihe ọmụmụ. Ọ bụkwa na e nweela mgbanwe dị iche iche na mbara ala na usoro ndụ nke ihe ndị dị ndụ ugbu a. Ihe ndị a niile bụ n'ihi oke mgbanwe ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke dị n'oge ahụ. Anyị maara na oge a were ihe dịka afọ 56. N'ime njirimara ndị bụ isi anyị na-ahụ ngbasawanye na mgbanwe nke ndị dị ndụ jupụtara na mbara ụwa.
N'ihi mgbanwe ndị a, ọtụtụ akụkụ ọhụrụ nke ihe ndị dị ndụ malitere ịdị adị nke anọgidere ruo taa. Banyere nkà mmụta mbara ala, n’ime mgbanwe ndị kacha dị ịrịba ama bụ mbugharị na mpekere nke ndị supercontinent ndị dị ugbu a. Imirikiti ndị ọkachamara na-ekwusi ike na enwere mpempe akwụkwọ dị iche iche nke ụwa nke dị n'oge Cambrian nakwa na ọ bụ nsonazụ nke nnukwu kọntinent buru ibu. Nnukwu kọntinent a kpọrọ E kewara Pannotia na 4 ndị ọzọ aha ha bụ: Gondwana, Baltica, Laurentia na Siberia.
Ọsọ nke ịsọ asọ kọntinent n'oge a dị elu karịa nke taa. Nke a mere ka mpekere ndị ahụ kewaa ngwa ngwa karịa. Banyere ihu igwe, enwere ederede ole na ole mana enwere ụfọdụ okike ndị ejiri nyochaa njirimara gburugburu ebe obibi. E kwuru na n'oge Cambrian, ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa nke oge ala ndị ọzọ. Nke a bụ n'ihi na enweghị obere iberibe ice ọ bụla na mbara ala. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugwu ugwu Phantalassa kpuchie ihu igwe ya na ihu igwe ya na oke osimiri.
Banyere ihu igwe anyị makwaara na e nwere ụfọdụ oscillations oge n'oge a na-ekwu na ha enweghị ọtụtụ mgbanwe mberede. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị ọkachamara na-azọrọ na na njedebe nke Cambrian na a ga-ahụ mbelata nke ọnọdụ ụwa niile. Nke a na-akpata ụfọdụ kọntinent nke ji nwayọ nwayọ nwayọ ka ice wee kpuchie ya.
Banyere ndụ n'oge a bụ ihe a na-akpọ mgbawa Cambrian n'ihi ntụgharị iche iche nke ụdị ndụ niile. Ọ bụ ezie na ndụ dị na Archaic aeon, ọ bụ mgbe ahụ tupu oge Cambrian na ọ nwere ike ịgbanye ebe ọ bụ na ndụ ndị ọzọ niile dị mfe. Ihe omuma a mara ebe otutu umu nwere ike itu. Otutu ihe di ndu nke putara ihe n’otu oge. Ekele maka akwụkwọ ndị mgbe ochie, achọtala ọtụtụ ozi. Ihe kpatara ntiwapụ nke Cambrian enwebeghị ike ịkọwa kpọmkwem ihe mmalite nke ndụ nwere ike ịdị iche iche.
E mere atụmatụ na ha bụ ihe ndị na-esonụ:
Meewanye ikuku oxygen
Ubara ozone na ozone oyi akwa na nchedo ya site na ikuku radiation ultraviolet.
Mee ka oke osimiri dịkwuo elu. Nke a pụtara na enwere ike ịnweta ọtụtụ ebe obibi, ebe obibi obibi na, ya mere, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị nwere ike ịba ụba.
Umu anumanu Cambrian biri na mmiri. Ihe ndi ozo nile di otutu ma huru ha na oke osimiri. Imirikiti anụmanụ ndị mejupụtara anụmanụ ndị Cambrian nwere ihe dị mgbagwoju anya. N'ebe a, anyị na-ahụ trilobites, ụfọdụ nnukwu invertebrates na ndị ọzọ dị ka ha bụ ebu, fụji na ikpuru. Anyị ga-enyocha otu otu ụdị anụmanụ ndị kachasị dị na Cambrian:
N'oge a, ọ bụ ihe a na-ahụkarị spong a na-asọ asọ n'oké osimiri. Taa, a na-ekewa ha na nsọtụ ụzọ. Njirimara ya bu na o nwere okporo osisi n’ime usoro ya. Site na pores ndị a ha na - enyere aka igbasa na iyo ihe ndị na-edozi ahụ dị na mmiri. Ihe ndeputa nke ihe ndia nyere aka inweta ihe omuma banyere aru umu anumanu ndia n’oge ahu. N'ihi ihe ndekọ ndị a, a maara na e nwere sponge ndị yiri akụkụ nke osisi na ndị ọzọ nwere ọdịdị cone.
Ha bụ anụmanụ ndị kachasị mepere emepe na ọtụtụ anụmanụ. Taa, ha bụ anụmanụ kachasị nwee anụmanụ n'ime ala anụmanụ. N'ime ụmụ anụmanụ nke Cambrian nke a abụghị otu. N'ime otu a, anyị na-ahụ ndị nnọchi anya kachasị dị ka trilobites. Ha bara ụba n'oge a nke fọrọ nke nta ka ha dịrị adị ruo mgbe ọgwụgwụ nke Oge Permian. Ha bụ otu n’ime anụmanụ ndị mbụ malitere iji anya ha ahụ ụzọ.
Osisi Cambrian: mollusks
Ebube ahụ gbanwere n'ụzọ dị iche iche na klaasị dị iche iche. Arefọdụ n’ime ha ka dị taa. Anyị nwere gastropods na cephalopods, n'etiti ndị ọzọ.
O nwere otutu mgbasa na iche iche n'oge a. Speciesdị echinoderms ọhụrụ pụtara nke nwere ike ịmegharị maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị iche iche. Klas nke lanarịrị ogologo oge bụ crinoid.
Anụmanụ Cambrian: chordates
Ọ bụ ìgwè kachasị mkpa nke ụmụ anụmanụ bụ na o sitere n'oge a. N'ihi anụmanụ ndị a ka amatara na ụmụ anụmanụ Cambrian gbasasịrị ọtụtụ ọnụọgụ dị ka vertebrates n’etiti nke anyị nwere amphibians, azụ, na-akpụ akpụ, nnụnụ na mammals. Ihe pụrụ iche nke anụmanụ ndị a bụ na ha nwere usoro a maara dị ka notochord. N'ihi ya aha chordates. Notochord bụ ụdọ tubular nke na-agbatị n'akụkụ akụkụ dum nke onye ọ bụla ma nwee ọrụ nhazi. Enwekwara usoro ụjọ nke etiti, ọdụ ọdụ ike na pharynx.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụmụ anụmanụ Cambrian na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Anụmanụ Cambrian
Oke Osimiri Thetis